Shaqadii dekedda Bosaaso oo weli xaniban – Radio Daljir
Shaqadii dekedda Bosaaso oo weli xaniban
Oktoobar 29, 2017 1:27 g 0
Dekedda wayn ee Bosaso oo ah isha ugu wayn ee dhaqaale ee Puntland ayaa wali waxaa hakad ku jira dhaqdhaqaaqii ganacsi ee ka socday, kadib muran kadhashay khidmadda lacageed ee doonyaha kusoo xiranaya dekedda Bosaso oo ay soo rogtay shirkadda P&O Ports oo lagu wareejiyay maamulka iyo balaarinta dhismaha dekedda Bosaaso.
Ganacsatada wax kala soo dega dekedda Bosaso oo la hadlay radio Daljir ayaa sheegay ganacsatada inay awoodi Karin lacagaha lagu soo rogay ganacsatada oo ay sheegeen inay aad uga badantahay khidmaddii hore (Port Charge) ee u xaroon jiray wasaaradda dekeddaha Puntland.
Ganacsadahan ayaa u sheegay radio Daljir in lagu soo rogay doonidii kusoo xiranaysa dekedda inay iska bixiso lacag dhan $12,000 (laba iyo toban kun oo doolar) halkii horay doonyahaasi looga qaadi jiray lacago u dhaxeeya $1,500 (Kun iyo shan boqol oo doolar) doonidii soo xiranaysa oo aan ku jirin canshuurta usoo xaroota wasaaradda maaliyadda Puntland ama alaabaha la canshuurayo.
Xiriiro aynu la sameeynay masuuliyiinta dekedda Bosaso ayaan wali inoo suurtagalin inay ka hadlaan xirnaashiyaha dekedda Bosaso, waxaana socda kulamo u dhaxeeya ganacsatada iyo dowladda.
Xirnaashiyaha dekedda Bosaso ayaa ah mid si guud loo dareemay,iyadoona arrintan ay aad u saamaysay dad badan oo horay ugu xirnayd noloshooda oo ay ka mid yihiin muruqmaalka iyo gaadiidlayda.
Warka Fiidnimo, Maxamed Laki, Daljir Garoowe (dhegayso)